Isbeddellada & raadinta maqaalada mawduuca:tufaax
Calaamadda Apple ee dhabarkaaga iPhone u rog badhan
Waxaan halkaan idinku soo gudbineynaa talobixin ku socota dhammaan isticmaaleyaasha iPhone-ka ee isticmaalaya macruufka 14 (oo xogtu u eg tahay intiinii badidiin) Nooca cusub ee iOS, waxaad ku dari kartaa badhan cusub iPhone-kaaga. Maya, maahan badhan dhab ah (uma baahnid inaad godadka godadkaaga ka
IPad Pro 2021 VS 2020: maxaad u dooneysaa inaad iPad u bedesho sanadkan
Soo-koobista Maxaa isbeddelaya naqshadda? Liquid Retina XDR, oo ah dalxiiskii ugu horreeyay ee mini-LED ee iPad-ka Iyadoo la adeegsanayo M1 chip iyo Thunderbolt, iPad Pro 2021 wuxuu bixiyaa aragtiyo cusub Kaliya hal sano kadib markii la cusbooneysiiyay iPad Pro, Apple wuxuu kor u qaaday xijaab cusub
IPhone 13 Pro Max: Tani waa waxa calaamadda Apple u eg tahay
Sida sanad kasta muddadan, iPhone-ka mustaqbalka ayaa bilaabaya inuu dadka ka dhigo inay ka hadlaan. Sannadkani ma aha mid ka reeban, waxaanan durbaba bilawnay inaan rinjiyeynno sawir muuqaal ah oo robot ah oo qeexaya mustaqbalka Apple. Waxaan si gaar ah u ognahay inay tahay inay had iyo jeer ka koo
Muxuu Apple u rabay inuu sasabto Netflix?
Dacwada ka furaneysa inta udhaxeysa Epic Games iyo Apple waa mid macluumaad badan leh. Maaddaama daabacaha Fortnite uu ku weerarayo Apple siyaasaddiisa ka dhanka ah tartanka ee uu la leeyahay App Store, kiisaska si lama huraan ah ayaa u soo baxaya, sida ku dhacday Sony shalay uun. Marka, maalinta se
Tijaabo: Apple AirTag, inaan waligaa waxba lumin
Soo koobidCool, waa maxay? Dejinta iyo ku dhowaanshaha Iyo goorta la lumay? Ma tahay qalab raadraac ah? GalleryKadib markii ay soo baxeen warar aan dhammaad lahayn, ugu dambaynti waxay ahayd xilligii gu'ga in shirkadda Cupertino ay qaabeysay AirTag, walxaha yaryar ee ku xiran ee si buuxda loogu dhej